The Irrawaddy's Blog: မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်း ရပ်တန့်ထားမှု CPI ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အင်တာဗျူး (၁)
မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို သူ့အစိုးရသက်တမ်း ၅ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ဆိုင်းငံ့မယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က လွှတ်တော်မှာ မကြေညာမီ မိမိတို့ ကုမ္ပဏီအား တစုံတရာအကြောင်းကြားခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ခဲ့လို့ အင်မတန် အံ့အားသင့်ခဲ့ရကြောင်း China Power Investment Corporation (CPI) ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ လူကျိရိူ (Lu Qizhou) က တရုတ်နိုင်ငံပိုင် China Daily သတင်းစာကြီးကို မနေ့က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ CPI ဟာ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာ ဒေါ်လာ သန်းထောင်ချီ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ တရုတ်အစိုးရပိုင် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်က CPI နဲ့ မြန်မာအစိုးရရဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အမှတ် (၁)၊ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီတို့ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၆၀၀ ကုန်ကျမယ့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအဝင် မေခမလိခမြစ်ပေါ်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ်ဆည် ၇ ခု အတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပမာဏ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ လောက်ရှိပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းတွေအတွက် ငွေအလုံးအရင်း မြှုပ်နှံထားတာကြောင့် စီမံကိန်းကို ဆက်လက်ပြီး သတ်မှတ်ကာလအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်လိုက်ပါက “တရုတ်ပြည်နဲ့ မြန်မာပြည်” နှစ်နိုင်ငံလုံး မဖော်ပြနိုင်လောက်အောင် ဆုံးရူံးမှုများ ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရဖက်က စီမံကိန်းအတွက် ချေးငွေ သဘောတူညီချက်များအရ ပိုက်ဆံများလည်း ရယူထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့ကြောင့် ယခုလို ရပ်တန့်လိုက်ခြင်းအတွက် မြန်မာဘက်မှ ဥပဒေကြောင်းအရ ပြဿနာများရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း မစ္စတာလူကျိရိူက ပြောထားပါတယ်။
အင်တာဗျူးက နည်းနည်းရှည်တဲ့အတွက် နှစ်ပိုင်းခွဲပြီး တင်ပြပါမယ်။ အခု တပိုင်းကို ကိုဘကောင်းက ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။
CPI ဥက္ကဋ္ဌ လူကျိရှို (ဓာတ်ပုံ - ဘလွန်းဘာ့ဂ်)
မေး။ မြန်မာအစိုးရက ဆောက်နေဆဲ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ရပ်လိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုကနေဘယ်လို ဖြစ်သွားတာပါလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါလား။
ဖြေ။ ကျနော်လည်း မီဒီယာတွေကတဆင့် ကြားတာပါပဲ။ ကြားလိုက်တော့ လုံးဝအံ့သြသွားတယ်။ ဒီလို "ဆိုင်းငံ့" တယ်လို့ မကြေညာခင် မြန်မာဘက်က ကျုပ်တို့ကို ဘာဆိုဘာမှ အကြောင်းကြားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ CPI ရယ် မြန်မာအစိုးရရဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အမှတ် (၁) ရယ်၊ မြန်မာကုမ္ပဏီ အေးရှားဝေါလ်ရယ် ၂၀၀၆ ဒီဇင်ဘာထဲက သဘောတူညီမှု သဝဏ်လွှာထိုးထားတာပါ။ ဒီလိုထိုးထားတဲ့ အချိန်ကစပြီး CPI ဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အပြန်အလှန်လေးစားတဲ့မူ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိူးစီးပွားယှဉ်ပြီး လုပ်ကိုင်တဲ့မူ၊ သူ့ရောကိုယ်ပါ အကျိုးရလဒ် ထွက်စေမယ့် မူဝါဒသဘောထားတွေကို အစဉ်တစိုက်ကျင့်သုံးခဲ့တာပါ။
မြန်မာနဲ့ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်တာမို့ တရုတ်-မြန်မာနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဥပဒေတွေ စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေကို တသွေမတိမ်းလိုက်နာခဲ့တာပါ။ ကျနော်တို့ တာဝန်ရှိတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းခဲ့တာပဲ။ နိုင်ငံတကာစံချိန်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာ Build-operate-transfer (BOT) အတိုင်းလုပ်ခဲ့တာပဲ။ မြန်မာနဲ့ တရုတ်အစိုးရနှစ်ဖက် မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ ရေစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကို ပူးတွဲဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်ရန်ဆိုပြီး ၂၀၀၉ မတ်လက မူဘောင်ချမှတ်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ဒီဧရာဝတီမြစ် အထက်ဖက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို CPI က လုပ်ဆောင်ဖို့ အတိအလင်း ဖော်ပြထားတာပဲ။
နောက်ပြီးကျနော်တို့က ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့တက္ကသိုလ်တွေ၊ သုတေသနဌာနတွေ၊ အကြံပေးအဖွဲ.အစည်းတွေ၊ တရုတ်ပြည်က ဂုဏ်သိက္ခာရှိ ပညာရှင်တွေကို (ဒီမြစ်ဆုံအပါအဝင်) ဧရာဝတီမြစ် အထက်ဖက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲတာရော၊ ဒီဇိုင်းရော၊ အသေးစိတ်လေ့လာမှုအတွက်ရော၊ စီမံကွပ်ကဲဖို့အတွက်ရော ခေါ်ယူခဲ့တာပဲ။ Changjiang Institute of Survey, Planning, Design and Research ဆိုရင် ဒီစီမံကိန်း အစီအစဉ်ချဖို့အတွက်ရော ဒီမြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့အတွက်ရော တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီဌာနဟာ တရုတ်ပြည်က Three Gorges ဆည်ကြီးကို ဒီဇိုင်းချပေးခဲ့တာမို့ပါ။
နောက် ကျနော်တို့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို လုပ်ပြီဆိုတော့လည်း မြန်မာအစိုးရ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရင်ပညာရှင်တွေ၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝိုင်းဝန်းပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတွေ၊ လေ့လာမှုတွေ အတူတကွ ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဆည်ဆောက်လုပ်ဖို့ ထောက်ခံတဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအပြင် ဒါနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ အထောက်အထားစာရွက်တွေ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဖက်စပ်လုပ်ဆောင်မယ့် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ သက်သေစာတမ်းတွေ၊ စီးပွားရေးလိုင်စင်တွေ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုချက်တွေ၊ လုပ်ကိုင်ခွင့်တွေ၊ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ တရားသူကြီးရဲ့အမြင်တွေ ဒါတွေအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နည်းဥပဒေသတွေနဲ့ တသွေမတိမ်း ကိုက်ညီအောင်လုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကတင် အခုသမ္မတဖြစ်နေတဲ့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ ယခင်အစိုးရရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့ ဆည်ဆောက်တဲ့နေရာကိုလာပြီး ဒီစီမံကိန်းကြီးကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် လုပ်ဆောင်ဖို့ ကျနော်တို့ကို လာပြောသွားသေးတာ။ အခု ဒီစီမံကိန်းကြီးကို ဗြုန်းဆို ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီ ဆိုတာကတော့ တကယ် နားမလည်နိုင်စရာဘဲ။ ဆိုင်းငံ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောက ဆောက်နေတာတွေ ရပ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ရင်တော့ ဒါဟာ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေတော့မှာပဲ။
မေး ။ CPI က ဘယ်လိုကနေဘယ်လို ဒီမြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းမှာ သွားလုပ်ကိုင်ဖြစ်တာလဲ။ အခု ဆည်ဆောက်လုပ်နေတဲ့ အခြေအနေကရော၊ နောက်ပြီး တကယ်လို့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာမလဲ။
ဖြေ ။ ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာဗျာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာဆိုရင် နည်းပညာအရရော သိပ်ကိုအဆင်ပြေပြီး စီးပွားရေး တွက်ချေကိုက်မှုအရပါ သိပ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ စွမ်းအင်ပါ။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ရေအားလျှပ်စစ်ကို ဖော်ထုတ်အသုံးချမှုက ၆၀ % အထက်၊ အမေရိကနိုင်ငံဆိုရင် ၇၂ %၊ ဂျပန်မှာဆိုရင် ၆၇%၊ ပြင်သစ်မှာဆိုရင် ၉၀ %၊ အီတလီမှာ ၉၅ %၊ နော်ဝေ မှာဆိုရင် ၆၀ % အထက်မှာရှိနေတာပါ။ အခုကျနော်တို့ တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင် ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းက ၅၀ % ရှိပြီ။ ၂၀၂၀ မှာဆိုရင် ၇၅ % အထက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ စုစုပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်ပမာဏက ၁၀၀ ဂစ်ဂါဝပ်လောက်ရှိတော့ ဒီနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာဆိုရင် ရေအားအရင်းအမြစ် အင်မတန်ပေါကြွယ်ဝတဲ့ ရှားရှားပါးပါးနိုင်ငံတနိုင်ငံပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် အခုဒီနိုင်ငံမှာ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်အသုံးချမှုက ၂. ၄၅ % လောက်ပဲရှိတော့ သူရှိတဲ့ရေအားအရင်းအမြစ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆို အဆမတန် နည်းနေတာပဲ။ ထုတ်သုံးလို့ရမယ့် အရင်းအမြစ်က အများကြီးကို ပိုလျှံနေတယ်။ အထူးသဖြင့် အခုကျုပ်တို့လုပ်တဲ့ ဧရာဝတီမြစ်အထက်ဘက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဆိုရင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်နဲ့လည်းနီးတယ်။ နောက်ပြီး ရလာတဲ့ လျှပ်စစ်က မြန်မာပြည် စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရုံတင်မကဘူး၊ တရုတ်ပြည်အတွက်လည်း သဘာဝကိုမထိခိုက်တဲ့ စွမ်းအင်ကိုလည်း ရရှိနိုင်တယ်။ ဒါတွေအပေါ် တွက်ဆပြီး သူရောကိုယ်ရော နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်စေမယ့် ဒီစီမံကိန်းကြီးမှာ ရင်းနှီးလုပ်ဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။
အခုအားလုံး ပူပန်နေတဲ့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းမှာ အကြီးဆုံး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းပဲ။ ဒါကို ကျနော်တို့ ၂၀၀၉ ဒီဇင်ဘာမှာ စဆောက်တယ်။ မြစ်ဆုံဒေသမှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေကိုလည်း နေရာရွှေ့ပြောင်းတာ ပြီးသွားပါပြီ။ ဆည်ဆောက်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ (ဆည်အတွက် လမ်းတွေ၊ ရေ၊ မီး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် မြေတွေညှိတာတွေ) အားလုံး အရှိန်အဟုန်အပြည့်နဲ့ စခဲ့ပြီးနေပြီ။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ရေသန့်စင်တဲ့ စက်ရုံတွေ၊ လောင်စာဆီ သိုလှောင်ရေးရုံတွေ တော်တော်တောင် ပြီးစီးနေပါပြီ။ ဆောက်လုပ်မယ့် ဆည်အောက်ပိုင်းက ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား တခုဆိုရင် ဆောက်နေဆဲ တန်းလန်းပါ၊ နောက်ပြီး ဆည်အတွက် ရေထွက်ပေါက် အဓိကလမ်းတွေ၊ ရေလွှဲစနစ်တွေဆိုရင်လည်း စတောင်စပြီးနေပါပြီ။
ဆည်အကောင်အထည်စဖော်တဲ့ ကာလကနေပြီး ငွေတွေလည်း အမြောက်အမြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာပါ။ ဆိုတော့ ဒါကြီးကို ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီဆိုရင် ဆုံးရူံးမှုက တိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတာတွေ၊ ငွေကြေးအသုံးစရိတ်တွေထက်မက ပိုပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို ကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့ သူတွေကလည်း စီမံကိန်းပျက်သွားတဲ့အတွက် ငွေကြေးတောင်းခံမှုတွေ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ လျှပ်စစ် မထုတ်လုပ်နိုင်တော့မှာတွေ၊ ဒီမြစ်ဆုံဆည်နဲ့အတူဆောက်တဲ့ တခြားဆည်တွေအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ အဆမတန် တက်လာမယ် အစရှိသဖြင့် ပြဿနာတွေအများကြီး ရင်ဆိုင်ရမယ်။ ဒါကြောင့် ဆည် ၇ ခုပါဝင်တဲ့ ဒီဧရာဝတီ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြီးဟာ အချိန်မီပြီးစီးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ တရုတ်ရော မြန်မာရော နှစ်နိုင်ငံလုံး တိုင်းတာလို့မရနိုင်တဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးတွေ ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်။ ဒီနှစ်ဆန်းပိုင်းက နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်ရပြီး ဟိုဘက်ဒီဘက် သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်တွေက တရုတ်ယွမ်ငွေနဲ့ ငွေချေးစာချုပ် သဘောတူညီချက်လုပ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာဘက်က ဒီငွေတွေပြန်ဆပ်ဖို့ အာမခံတဲ့သဘောနဲ့ မြန်မာအစိုးရဘက်က မြစ်ဆုံဆည်မံကိန်းမှာ သူတို့လည်း ရှယ်ယာဝင်ထည့်တယ်။
နောက်ပြီး ဒီချေးငွေစာချုပ်အရ ငွေတွေပြန်ဆပ်ဖို့ အဓိက အရင်းအမြစ်အနေနဲ့ မြန်မာဘက်က ဒီဆည်ကနေရမယ့် ငွေကြေး အကျိုးအမြတ်တွေကို ကြိုယူထားတာလည်းရှိတယ်။ ဆိုတော့ ဒီမြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကြီးသာ ဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီဆိုရင် ပထမလုပ်ထားတဲ့ ငွေကြးစာချုပ် သဘောတူညီချက်တိုင်း ပိုက်ဆံတွေမြန်မာဘက်က ပြန်ပေးနိုင်ဖို့ အကြီးအကျယ် အခက်တွေ့မှာပါ။
ကျနော့်အမြင်တော့ ဒီဆည်ဆောက်ဖို့အတွက် နှစ်နိုင်ငံလုံးက လုံလောက်တဲ့ သိပ္ပံဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွေကို သက်သေပြနိုင်လောက်အောင် ပြည့်ပြည့်ဝဝ လေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့အတွက် နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေ သေချာကျကျနန လုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက် ဒီမြစ်ဆုံဆည်မံကိန်းကြီးဟာ သမိုင်းရဲ့အစမ်းအသပ်ကို သေချာပေါက် ခံနိုင်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် မဆုတ်မနစ် အားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီစီမံကိန်းကြီး လျာထားတဲ့ ကာလအတိုင်း ချောချောမွေ့မွေ့ အောင်အောင်မြင်မြင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားနိုင်မယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရှိပြီး သူရောကိုရော အကျိုးရှိတဲ့ ရလဒ် (win-win result) တွေ စစ်စစ်မှန်မှန် ပေါ်ထွက်လာမယ်လို့ ကျနော် အခိုင်အမာမျှော်လင့်ပါတယ်။
မေး ။ ဒီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ပဲ စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ် ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီး တချို့ရေးတာတွေလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ ။ ဒီအမြင်ဟာ တက်တက်စက် လွဲတဲ့အမြင်ပါ။ ဒီလိုမှားတဲ့အမြင်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့သူတွေက ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကို နားမလည်သူတွေရှိသလို တချို့တွေကလည်း တမင် စေတနာဆိုးတွေ၊ မကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ပြောဆိုနေကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဆည်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ Build-operate-transfer ကို အကောင်အထည်ဖော်တာ နိုင်ငံတကာမှာထုံးစံပါ။ ဒီ အခြေခံအရ ဧရာဝတီမြစ်ညာအထက်ပိုင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ပြီးစီးတာနဲ့တပြိုင်နက် CPI ဟာ ဒီစီမံကိန်း နှစ် ၅၀ တိုင် လည်ပတ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ နှစ် ၅၀ ပြည့်တာနဲ့ ဒီစီမံကိန်းကို မြန်မာထံ အခမဲ့လွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း ဧရာဝတီမြစ်ညာအထက်ပိုင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးအရှိန်အဟုန် တိုးတက်ဖို့ သိသိသာသာ အထောက်အကူပြုပြီး မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်း အင်မတန် အထောက်အပံ့ဖြစ်မှာပါ။
ဒီဆည်စီမံကိန်းကြီး တခုလုံးပြီးလို့ တိုက်ရိုက်စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်အနေကတော့ မြန်မာပြည်ဟာ အခွန်ကတဆင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၄ ဘီလီယံ ရမှာတင်မကဘူး၊ လျှပ်စစ်အလကားရမယ်၊ ထွက်လာတဲ့ လျှပ်စစ်ရောင်းလို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေလည်း ခွဲဝေကြရဦးမယ်။ နှစ် ၅၀ အတွင်း CPI က မြုပ်နှံလိုက်လို့ရလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ထက် အဆမတန် မြန်မာဘက်က ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆည်ရဲ့ ဒီဇိုင်းသက်တမ်းက အနှစ် ၁၀၀ ကျော်ဆိုတော့ အနှစ် ၅၀ ပြည့်လို့ ဒီဆည်ကို လွှဲလိုက်ရင် မြန်မာဖက်က နောက်အနှစ် ၅၀ လောက်ဒီဆည်ကြီးကနေ အမေရိကန်ဘီလီယံ ဆယ်ဂဏန်းလောက်ရှိတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ ရနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့ တိုက်ရိုက်စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်ရော ဒီဆည်ကနေ မြန်မာဘက်က ရရှိဦးမှာပါ။ အမေရိကန်ဒေါ်လာဆိုတော့ နောင်မှာ ဒေါ်လာတန်ဖိုး ကျမသွားရင်ပေါ့ဆိုတာတော့ နားလည်လောက်ပါတယ်။
နောက် တိုက်ရိုက်မဟုတ်တဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေပြောရရင် ဒီအဆင့်မြင့်တဲ့၊ စွမ်းအင်အများကြီး ထုတ်နိုင်တဲ့ မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံက မြန်မာပြည်ရဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အဆောက်အအုံကို အလျင်အမြန်တိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရုံတင်မကဘူး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဆောက်လုပ်ရေး၊ တပ်ဆင်ရေး၊ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ပညာရှင်တွေကို အမြောက်အများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍဟာ တရှိန်ထိုး အံ့မခန်း ခုန်ပျံတိုးတက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တနိုင်ငံလုံး စီးပွားရေးရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တခုက မြစ်ဆုံစီမံကိန်းပြီးရင် ဆည်အောက်ဘက်က ရေကြီးတဲ့အန္တရယ်ကိုလည်း သေသေချာချာ ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ။ မြစ်ကမ်းပါးတလျှောက်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဒေသခံတွေ ရေကြီးတဲ့အခါ ခံစားရတဲ့ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ပါးအောင်လည်း လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ၅ နှစ်မှာ ၁ ကြိမ်လောက် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရေကြီးတဲ့ဒဏ် ခံရတဲ့အခြေအနေဟာ ဆည်ကြီးပြီးသွားရင် အနှစ် ၂၀ မှာ ၁ ခါ လောက်ပဲ ရေဘေးကို ခံရတဲ့အခြေအနေကို ရောက်သွားမယ်။
နောက်ပြီး ကျနော်တို့က ဆည်နဲ့အတူ ၇၅၀ ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ လမ်းကြီးတလမ်းရယ်၊ ရေ၊ မိုးလေဝသ၊ မြေငလျှင်အခြေအနေတွေ လေ့လာတဲ့ စခန်းတွေ ပေါ်ထွက်လာမယ်။ ဒီအဆောက်အအုံတွေဟာ ဒေသခံတွေအတွက် မုချမသွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ အရင်းအနှီးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှာမို့လို့ သူတို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝကို မြှင့်တင်ပေးမှာပါ။
နောက်ထပ်ပြောချင်တာကတော့ ဆည်ဆောက်လုပ်ရေး အရှိန်မြင့်မြင့် အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အချိန်မှာ အလုပ်သမား ၄၀၀၀၀ လောက် လိုမှာမို့လို့ ဒေသခံတွေ အလုပ်ရကြဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ ဒီ (ဆည် ၇ ခုအပါအဝင်) ဆည်စီမံကိန်း ဆောက်လုပ်ရေးခွင်မှာ မြန်မာအလုပ်သမား ၂၀၀၀ လောက်ရှိပြီး ၁၄၀၀ လောက်က မြစ်ဆုံဆည်ဆောက်လုပ်ရေးမှာ ဝင်လုပ်နေကြတာပါ။ သူတို့ ဒီလိုဝင်လုပ်တာရော ဒီဆည်လုပ်ငန်းမှာ လုပ်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ပေးတာကနေ ဒေသခံတွေက အတော်ကို သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးအဆင့်အတန်း လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ တိုးတက်သွားကြပါပြီ။
Posted in: Environment , Interview , သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် , အင်တာဗျူး
လုပ်တုန်းက ကျွန်ပ်တို့ပြည်သူတွေကို အသိပေး လုပ်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။
တရုပ် တွေ သိဖို့ပြောချင်တယ်။ စစ်အာရှင် စစ်အစိုးရ တွေ နဲ့ လုပ်ရင် ဒီလို ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သင်ခန်းစာ ယူသင့်ပါပြီး။ ကဒါဖီတုန်းက လည်း ပြည်သူတွေ မျက်နာကို မကြည့်ပဲ စီပွားရေး ဝိသမလောဘတက်ပြီး အာဏာရှင်နဲ့ ညှီလုပ်ခဲ့တာ ကိုယ့်ဒဏ် ကိုယ်အပြစ် ကိုယ်ခံလိုက်ကွာ။
ဥပဒေ လူ့ အခွင့်အရေ ရှု့ ထောင့် ၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု့ ရှု့ ထောင့်ကနေ လည် ငါတို့ က မင်းတို့ တရုပ်ကို တရားစွဲရလိမ့်မယ်။
columbus said... :
ကျနော်တို့ CPI ရယ် မြန်မာအစိုးရရဲ့ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန အမှတ် (၁) ရယ်၊ မြန်မာကုမ္ပဏီ အေးရှားဝေါလ်ရယ် ၂၀၀၆ ဒီဇင်ဘာထဲက သဘောတူညီမှု သဝဏ်လွှာထိုးထားတာပါ။
Once flooding in 20 years... Myitkyina will be gone forever.
Please remember the life of Hydro-power plant. What is happening on Lawpita hydro-power plant now. Do you think it is still producing the same power as new? No way.
Now more than one million Chinese nationality(pure chinese nationality entering after 1988)are already settled down in Kachin and Shan State asalocal people. We don't need any more.
သူတို့မေး သူတို့ဖြေပေါ့ ... တော်တော်ရယ်ရတဲ့ ကောင်တွေ မေးပါလား သူတို့ဆီက ဆည်တွေဘာဖြစ်နေပြီလဲ တခွန်းမပါဘူး ဆည်ပြီးသွားရင် ဖြစ်နိုင်မယ့် ဆိုးကျိုးတစ်ခု မပါဘူး သူတို့နဲ့တွဲလာတာ ကြာပြီ ဘာပညာရတုန်း ဘာအလုပ်အကိုင်တွေ ရတုန်း အောက်ခြေကအစ ရှိသမျှ တရုပ်အကုန်ခေါ်လာတာ စီးပွားရေးထက် ဆည်ဆောက်ခြင်း နောက်ကွယ်က ဗျူဟာက ပိုအရေးကြီးလိမ့်မယ်
မြစ်ဆုံမတိုင်ခင် သီလ၀ါ ပရောဂျက်ရှိခဲ့တယ် စက်မှုဇုန်တို့ ဆိပ်ကမ်းတို့ အတွက်ဆိုပြီး တရုပ်တစ်သိန်းကို သန်လျင်မှာထားဖို့ တောင်းခဲ့တယ် အဲဒါမရလို့ မြစ်ဆုံပရောဂျက်နဲ့ ၀င်လာဖို့ကြံတာ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ် တို့လူကြီးတွေ ပညာတတ်ဖို့လိုတယ် သူတို့မှာ ဒီနည်းမရရင် ဟိုနည်းဆိုပြီး နှစ်လေးငါးဆယ်စာအတွက် ဗျူဟာ ချပြီးသားဖြစ်မယ် မြစ်ဆုံအစား သီလ၀ါကို ပြန်လှည့်လာနိုင်တယ် အားလုံးသတိရှိကြပါ
We (People of Burma,Government and Army)must be united to challenge China government.
We do not hate Chinese but China government always like to bully Asian countries in many ways.
If necessary, I am willing to die for our country to fight against China government.
trueview said... :
ဆည်ပြီးသွားရင်လည်း အဲဒီရေပြင်ကြီးမှာ သူတို့ပြည် ကာကွယ်ရေးဆိုပြီး တို့မသိတဲ့အကြံတွေ ရှိလျှင်ရှိနေမှာ၊ တခါ နှစ် ၅၀ ထိန်းပြီး အဲဒီက လာတဲ့ရေကို သောက်ရမည့် တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက် လည်း စဉ်းစားရမယ်။
here is original interview in Eng
ဘယ် တရုတ်ပစ္စည်း နှစ်၅၀ခံလဲ။ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး ဆိုတဲ စက်ပစ္စည်းတောင် life span နှစ်၅၀ မရှိဘူး။ အခုသူတိုအကျိုးပျက်တော့ စခြိမ်းချောက်နေပြီး။ ကျွန်ုပ်တိုတွေလဲ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သင့်လဲ၊ သူတို့တောင်းတဲလျော်ကြေးမပေးရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲ၊ သူတိုအကူအညီးမပေးဘူးလား။ စစ်ရေးအရဝင်မှာလား၊ သူတိုက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှာလား၊ စစ်ရေးဘဲ ပူစရာရှိတယ်၊ US နဲ့ India နဲ့ပြန်ကစားရမယ်။
စစ်ဗိုလ်တွေက ကျေဇူးတရာဆိုတာ သူတိုမှာမရှိဘူး ခင်ဗျာတိုမစဉ်မိဘူးလာ
နအဖက တရားဝင် အစိုးရ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တရုတ်တွေကသိပါတယ်..သိသိကြီးနဲ့ တရားမ၀င် အစိုးရနဲ့ လုပ်ထားတဲ့စီမံကိန်းဆိုတော့ ဥပဒေကြောင်းအရ အစကတည်းက မြန်မာပြည်သူအတွက် တရားမ၀င် စီမံကိန်းပဲ..ဦးစောမောင် ပေးထားတဲ့ကတိကို တရုတ်ကျားကန် အမြတ်ထုတ်မှုနဲ့ဦးသန်းရွှေ က ဟင့်အင်း ဖျက်လိုက်တော့ သန်း ၅၀ ပြည်သူရဲ့၉၀ ရလာဒ် အစိုးရဖွဲ့ခွင့့် အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရလို ခု..ဦးသိန်းစိန်က ဟင့်အင်း လုပ်တော့..မတရားကျားကန် စားခဲ့တဲ့ တရုတ်က အန်ထုတ်ရမယ့် အလှည့်ပေါ့..အစကတည်းက တရားမ၀င်လုပ်ထားတဲ့အလုပ်က တရားဥပဒေကြောင်းအရ တရားမ၀င်ဘူးပေါ့..တရုတ်တွေလူပါးဝလာရင်တော့..၉၀ အနိုင်ရပါတီကို ပြန်ပြီး အာဏာလွှဲ အစိုးရဖွဲ့ ပေးလိုက်ရုံပေါ့..ငရွှေက အကြံပိုင်ပါတယ်..
ကဒါဖီလည်း ၀ိုက်လိုက်တာပဲ..စေတနာမမှန်တဲ့ တရုတ်တွေ လူပါးပုလင်းရှနေပီလေ..၀ဋ်လည်ရမှာပေါ့..
Eleven က ဆရာကြီး CEO ကိုလည်း ပြောပြလိုက်ပါဦး .. ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတိုင်း အရမ်းမကြောက်ပါနဲ့လို့ ကိုယ်နဲ့တူမှ အမှန်လို့ အမြဲမယူပါနဲ့ လို့ သတိလေးဝိုင်းပေးကြပါဦး (ဒီလူက လူတော်ပါ .. သူ့ဘေးမှာလည်း လူတော်တွေချည်းပါ ... ဒါပေမဲ့ ကြောက်စိတ်အရင် ၀င်တတ်တဲ့လူတွေ စုနေတော့ ထစ်ကနဲဆို သွေးရှုးသွေးတန်း ဖြစ်တတ်တဲ့ အဖွဲ့လေးပါ .. အခြေအနေအေး ပြီဆိုရင်တော့ စဉ်းစားအားလေးတွေ တော့ရှိပါတယ်)ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ တရုပ်သတင်းလေးပါ
“ဆည်ဆောက်တာကို ပြည်သူတွေ ဆန္ဒပြပြီးနောက် ၄ရက်အကြာမှာ ဦးသိန်းစိန်က ဆည်ဆောက်တာကို ရပ်တန့်ဖို့ ကြေညာခဲ့တဲ့အကြောင်း၊”
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုရင် မင်းတို.တရုတ်ပြည်က မြစ်တွေကနေလုပ်ပေ့ါ ဘာလိုငါတို.ရဲ. နိုင်ငံကနေ အဆီနှစ်ကိလာထုတ်သေးလဲ သူခိုးက လူပြန်ဟစ်တယ်
Very funny. Do you think the Myanmar people are going against with your plan with bad intention? We love our country. We love our people. If it will truly benefit our people, we won't deny it. But we see your bad intention of colonizing our country and exploiting our people. That's why we rejected your plan. Do you think the Chinese love our country more than we do. Don't insult us. Even if the Dam will store gold full to its banks we won't accept your plan because we love the Irrawaddy and its water more. Be Wise, Man. Be kind enough to understand our honest and brave hearts.
ခုအခြေအနေနဲ့တင် တရုတ်အပေါ်အလွန်အမင်းမီခိုခဲ့တဲ့ အပစ်ကိုသိလောက်ပါပီ။ နှစ်ပေါင်း၅၀ တောင် သွေးစုပ်ပီးရင် ဘာတွေကျန်တော့မှာလဲ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒ မပါပဲလုပ်ခဲ့တာလေ။
China China....hello my boy, you underestimated Burmese people. it wasbbbbbbbbeginning of democracy sweet tease.
bbbbbbbbbeginning of LESSON FOR YOU. whatever you said, all are shit only.
to our president U Thein Sein.... I didn't know about you can do one time kick for three goals ( may be more ). thank you Mr president.
China..by the way, your country's back door is still open.hahahahahaha..china china china.
Hello my fello Burmese...China want big DAM. please give to your D....K instead for DAM.
ဧရာဝတီတောင် ဘယ်လိုစာလုံးပေါင်းရမယ်ဆိုတာ သိမှာတောင်မဟုတ်တဲ့ သောက်တရုပ်ကများ ဆည်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေ ရွတ်ပြနေသေးတယ်။
ခင်ဗျာတို့ ဆည် နှစ်ငါးဆယ် တည်တံ့ပါမယ်လို့ ခင်ဗျား ကတိမပေးသွားဘူး..အာမမခံသွားဘူး ..ပြီးတော့ Fault Zone ပြတ်ရွေ့ဇုံမှာ ဆောက်ထားတဲ့ အတွက် ငလျင်လှုပ်ရင် သေကြေပျက်စီးနိုင်တာတွေ ခင်ဗျားထည့်ပြောမသွားဘူး....ခင်ဗျားခေါင်းထဲ မှာ အကျိုးအမြတ်နဲ့ တရုတ်ဘက်က ဘာမှ မထိခိုက်ဘဲ ရမယ့် စွမ်းအင်လုံခြုံရေး ဒါပဲရှိတယ်....
ခင်ဗျားဟာ လူကြီးလူကောင်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ခင်ဗျား စကားက သက်သေပဲ...
တတ်လည်းတတ်နိုင်တာပဲ . . .
နှစ် ၅၀ ပြီးမှဆိုတော့..
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က ဧရာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြီးကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ပြီလို့ ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေရော မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ အထိမ်းအမှတ် ဧရာဝတီမြစ်ကြီးပါ ပုံသဏ္ဌာန်မပျက် ဆက်လက် တည်ရှိနေတော့မှာပါ ………. ဒါပေမဲ့ သမ္မတကြီးနေရာက ရင်ဆိုင်ရမယ့် တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ မသက်မသာအခြေအနေ ရှိနေမှာပါ……..ဒီလို နိုင်ငံအရေးတွေ့ကြုံလာရင် ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ သမ္မကြီးဘက်က ဘယ်လိုများ ရပ်တည်ပေးကြမလဲလို့ မေးချင်ပါတယ် ………..
ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်လိုက်လို့ မြန်မာပြည်က ပေးလျော်ရရင် ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ စိုက်လျော် ပေးလိုက်ချင်ပါတယ် ………. လူတစ်ယောက် ဒေါ်လာ (၂၀) ဆိုရင် . . . . . ဒီစီမံကိန်းအတွက် ပံ့ပိုးမှုတွေ ရထားသူတွေက များများထည့်ကြပေါ့ . . . . . (၁၉၉၇ ခုနှစ် အာရှ စီးပွားရေးပျက်တုန်းက ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေက သူတို့ပိုင် ရွှေတွေကို နိုင်ငံတော်ကို လှူခဲ့ကြတယ်) တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတိထားစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ဒီအကျင့်ပျက် ခြစားသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တဲ့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဝေးဝေးပြတ်ပြတ်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်ဗျာ . . . . . . . .
ခင်ဗျားတို့ရော . . . . . . . ?
လျော်ကြေး ပေးရမယ်ဟုတ်လား။ ရတယ် ပေးမယ်။ ဘယ်လောက်လိုချင်လဲ။ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ကို လျော်ကြေးပေးသလို အဲ့ဒီနေရာကနေ ရွှေ့ပြောင်းခံရတဲ့သူတွေကိုလည်း အရင် လျော်ကြေးပေး၊ ပြီးရင် ပျက်စီးသွားတဲ့ တောတောင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေကို နဂိုမူလအတိုင်းဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ပေး။ အဲ့ဒီလို သူများမြေကို လာဖျက်ဆီးတဲ့အတွက် ငါတို့ကိုလည်း ပြန်လျော်ပေး။ အဲ့ဒီလျော်ကြေးတွေ ငါတို့ အရင်ပြန်ရပြီးမှ မင်းတို့အတွက် လျော်ကြေးကို ပေးမယ်။ ရှင်းပလား။
တယ်ဆိုတဲ့စာပါလား ကိုတရုပ်ရယ် :)
azb said... :
ကျနော်ကတော့ အဲဒီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အတွက် တယုတ်ကြီးကို လျော်ကြေးပြန်ပေးချင်ပါတယ်.. သူတို့တဲ့ မဟာတံတိုင်းကြီးအပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ မီးရထားလမ်းကြီးဖောက်ပေးချင်ပါတယ်.. တယုတ်ပြည်ကြီးရဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူဖြစ်မယ့်အပြင်.. ဒေသခံတွေလည်း အလုပ်အကိုင်ရရှိဦးမှာပါ..သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လည်း ထိခိုက်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ စီမံကိန်းပါ.. ကဲ.. ဘယ်လိုလဲ တယုတ်ကြီး.. သဘောတူလက်ခံနိုင်မလား..